विश्वाससँग जोडिएको छ छाउगोठ, भत्काउनुभन्दा पहिले जनचेतना आवश्यक | Ujyaalo Online:: Nepal News, Nepali Samachaar
माघ ८, २०७६ बुधबार १४:२:२५ | करुणा कुँवर
महिनावारी भएको बेला सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका महिला गोठमा बस्छन् । यतिमात्रै हैन, उनीहरुले दूध–दही खान हुँदैन, गाईलाई छुन हुँदैन भन्ने चलन छ । तरकारी, फलफूल लगाएको बारीमा जाँदा समेत बोट नै सुक्छ भन्दै बारीमा जान पनि बन्देज लगाइन्छ ।
गोठ भत्काइएको ठाउँमा कस्तो अध्ययन हुँदैछ ?
गोठ भत्काउने अभियान जारी छ । कतिपय ठाउँमा भत्काइ सकिए । तर त्यो भत्काइएका ठाउँमा महिलाले के गरिरहेका छन् ? छाउ भएका महिला कसरी बसिरहेका छन् भन्ने कुरा हेरियो त ? घरभित्रै बस्ने कुरा महिला अथवा परिवारले स्वीकारेको छ त ? भन्ने कुरामा अहिले कसैले ध्यान दिएको पाइँदैन ।
कतिपय ठाउँमा तैँले गर्दा यस्तो भयो भन्दै महिलालाई नै दोषी बनाइएको छ होला । अहिले गोठ भत्काइएका महिला कहाँ बस्छन् त ? घरमा बस्ने ठाउँ छ त ? यो अध्ययन हुन जरुरी छ ।
घरभित्र बस्न सक्ने मात्रै हो कि चुलोचौको सबै छुनैपर्ने हो कि ? यसको लागि परिवारले के गर्न सक्छ भन्ने छलफल नै नगरि गोठ भत्काउँदा महिला तनावमा परेका छन् ।
गोठ त भत्काइयो । स्वास्थ्य स्थिति कस्तो छ ? मानसिक स्थिति कस्तो छ भन्ने कुराको त चर्चा गरिएको छैन । यस्तो अवस्थामा दुःख भोग्नुपर्ने फेरि महिलाले नै हो ।
हाम्रो संस्कृति र समाजको कुरा हेर्ने हो भने परिवारमा को शक्तिमा छ ? बा, हजुरबा, दाइ र कतिपय ठाउँमा आमा हजुरआमा छन् । उनीहरुमा चेतना आवश्यक छ । एक घरमा मात्रै यो परिर्वतन गर्न सक्यो भने बिस्तारै समाजका अरु मान्छे परिवर्तन हुन्छन् ।
कुँवर मनाेविद् हुनुहुन्छ ।